တရားသူကြီးမှတ်စာ - ဝီကီပီးဒီးယား
တရားသူကြီး မှတ်စာ ဟူ၍ လူသိများသော ဣသရေလ(အစ္ဇရာလိုက်)မျိုးနွယ်တို့ကို ကာကွယ်သူ ခေါင်းဆောင်များ[မှတ်စု ၁] ကျမ်း (ספר שופטים, အင်္ဂလိပ်: The Book of Judges) သည် ဟီဘရူးသမ္မာကျမ်းစာနှင့် ခရစ်ယာန် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတို့၏ သတ္တမမြောက်ကျမ်းစာအုပ် ဖြစ်သည်။ ဂျောရှုဝါကျမ်း (ယောရှုမှတ်စာ) တွင်ဖော်ပြထားသော အောင်မြင်မှုကာလမှ ဆမ်မြူယယ်လ်ကျမ်းမှ (ဓမ္မရာဇဝင်ပထမစောင်) တိုင်းပြည်တည်ထောင်ခြင်းအထိ လွှမ်းခြုံနိုင်သော အကြောင်းများပါဝင်သည်။ ယင်းကာလများ၌ သမ္မာကျမ်းလာ တရားသူကြီးဟု ခေါ်သောသူများသည် ယာယီခေါင်းဆောင်များအဖြစ် ထမ်းရွက်ခဲ့ကြသည်။ ဇာတ်လမ်းများသည် တညီတညာတည်းသော ပုံစံအသွင်များဖြစ်၍ လူများသည် 'ယာဝေး' (ယာဗေး) (Yahweh) ဘုရားသခင်ကို မယုံကြည် သစ္စာမရှိသူများဖြစ်၍ ဘုရားသခင်သည် ၎င်းတို့ကို ရန်သူများလက်အတွင်းသို့ ပို့ဆောင် ခဲ့သည်။ လူများ နောင်တရ၍ ဘုရားသခင်ကို တောင်းပန်ကြရာ ဘုရားက ခေါင်းဆောင် (ချန်ပီယံ) တို့ကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ထိုစေလွှတ်ခံသူများက ဣသရေလ(အစ္ဇရာလိုက်)များကို ဖိနှိပ်ခြင်းမှ ကင်းလွတ်စေ၍ ကြွယ်ဝစေသည်။ သို့သော် များမကြာမီ ဘုရားသခင်အပေါ် ယုံကြည်မှု ပျက်ပြားလာပြန်သည်။ ဇာတ်လမ်းများမှာ ဤသို့ ထပ်ကျော့ပြန်ဖြစ်သည်။ ပညာရှင်များက ဤကျမ်း၌ပါသော ဇာတ်လမ်းများသည် ယောရှုမှတ်စာ၊ တရားသူကြီးမှတ်စာ၊ ဓမ္မရာဇဝင်ပထမစောင် မှ စတုတ္ထစာစောင်၊ယေရမိအနာဂတ္တိကျမ်း များသမိုင်းတွင် အဓိက ကျမ်း၏ နန်းဆက်နေ့စွဲ တည်းဖြတ်သည့်မူတစ်ခုအရ ဘီစီ (၆၀၀/၇၀၀/၈၀၀) သက်တမ်းရှိနိုင်ပြီး ရှေးအကျဆုံး ဖြစ်တန်ရာဟူ၍ ယူဆကြသည်။ ဤကျမ်းပါ ဒေဗေါရသီချင်းများသည် ပို၍ စောနိုင်သည်ဟူ၍လည်း ယူဆကြသည်။
၁။ စံတော်မီဝိသေသလက္ခဏာ လူ့သမိုင်းစဉ်ကာလတလျှောက်တွင် ဘုရားသခင်က အားနည်းချက်ရှိသော လူသားအား တစ်မျိုးတဖုံ ထူးခြားစွာ အသုံးပြုပါသည်။ တရားသူကြီးမှတ်စာကို အချက်(၃)ခုဖြင့်ချိန်ထိုးပါသည်။ “ဘုရားသခင်သည် ပညာရှိတို့ကို ရှက်ကြောက်စေခြင်းငှါ၊ လောကီအမိုက်အရာ၌ မိုက်မဲသောသူတို့ကို ရွေးကောက်တော်မူ၏ အစွမ်းသတ္တိရှိသောသူတို့ကို ရှက်ကြောက်စြေခင်းငှါ လောကီအရာ၌ အားနည်းသောသူတို့ကို ရွေးကောက်တော်မူ၏။ မြတ်သောသူတို့ကို ရှက်ကြောက်စေခြင်းငှါ လောကီအရာ၌ ဆင်းရဲသောသူ၊ မရေရာသောသူ၊ ယုတ်သောသူတို့ကို ရွေးကောက်တော်မူ၏” (၁ကော ၁:၂၇-၂၉)။ ဥပမာအားဖြင့် ဘယ်ကျော်ဧဟုဒကို သုံး၍ ဣသရေလအမျိုးကို ကယ်တင်ခဲ့သည်။ သာမန်အားဖြင့် ဘယ်လက်မှာ ညာလက်ထက် အသုံးနည်း၍ အင်အားချို့တဲ့သည်။ ရှံဂါသည်ဟု တုတ်ချွန်ဖြင့် ဖိလိတ္တိသားများကို အနိုင်ယူ တိုက်ခိုက်ပြန်သည်(၃:၃၁)။ အားနွဲ့သူမိန်းမသား ဒေဗောရသည် (၄:၁-၅:၃၁) ဗာရက်၏ စစ်သားတစ်သောင်း အင်အားထက် အစွမ်းတန်ခိုးရှိသည်။ သံရထား ၉၀၀ ပိုင်စိုးသော သိသရစစ်သူကြီးကိုလည်း အတိတ်နိမိတ် ဖတ်၍ အနိုင်ယူသည် (၄:၁၀-၁၃)။ မိန်းမသားယေလက တံသင်တစ်ချောင်းတည်းဖြင့် စစ်သူကြီး သိသရအား သတ်ဖြတ်နိုင်သည် (၄:၂၁) သူ့တံသင်ကိုလည်း ဘယ်လက်ဖြင့် ထိုးစိုက်သည် (၅:၂၆ Septuagint) စစ်သူကြီး ဂိဒေါင်သည် ဘုရားသခင်၏ အမိန့်အတိုင်း စစ်သည်တော် ၃၂,၀၀၀ ကိုလျှော့ချ၍ လက်ရွေးစင်စစ်သား ၃၀၀ ဖြင့် သွားရောက် တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ (၇:၁-၈) မုယောမုန့်တစ်ချပ် အိပ်မက်ဖြင့် မိဒျန်တပ်တစ်ခုလုံး ပျက်စီးသွားသည် (၇:၁-၃)။ ဂိဒေါင်၏ စစ်သည်တော်များ ကိုင်ဆောင်သော စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများမှာ တံပိုး၊ မီးခွက်နှ၍့် မြေအိုးအစရှိသော ချက်ချင်း လူမသေစေနိုင်သောအရာ ဝတ္ထုများသာဖြစ်သည် (၇:၁၆)။ မိန်းမတစ်ယောက်၏ ကျောက်ဆုံဖြင့် ပစ်ပေါက်လိုက်မှုကြောင့် စစ်သူကြီး အဘိမလက် ခေါင်းကွဲသေပွဲဝင်ရသည် (၉:၃၅)။ ၁၀:၁ တွင်ပါရှိသည့် တောလဆိုသည်မှာ တုပ်သန်ကောင်ဟု အနက်ရသည်။ ရှုံဆုန်၏ မိခင်ကို စတွေ့သောအခါ မြုံမဖြစ်သည် (၁၃:၂)။ ရှံဆုံသည် မြည်းမေးရိုးဖြင့် ဖိလိတ္တိလူတစ်ထောင်ကို နှိမ်နင်းခဲ့သည် (၁၅:၁၅)။
သမ္မာကျမ်းစာပါသမျှ စကားလုံးတိုင်းသည် ဘုရားသခင်တန်ခိုးမှုတ်သွင်းတော်မူသော စကားတော်များ ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်လက်ခံလျှင် တရားသူကြီးမှတ်စာသည်လည်း ဝိညာဉ်ရေးရာ သင်ခန်းစာများစွာရရှိနိုင်သည်။ အချို့သင်ခန်းစားများကို ဖိနှိပ်သူ လူတန်းစား တစ်ပါးအမျိုးသားများထံမှ ရယူနိုင်သကဲ့သို့ တရားသူကြီးတို့၏ လုပ်ဆောင်ပုံတွင်လည်း ထုတ်ယူနိုင်သည်။ ဖိနှိပ်နေသော လောကဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးများဟု ယူနိုင်သကဲ့သို့ တရားသူကြီးများသည် ဝိညာဉ်ရေးရာ သူရဲကောင်းကြီးများအဖြစ် ရှုမြင်နိုင်သည်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းများစွာက အဖြစ်အပျက်များဖြစ်သော်လည်း လူ့သမိုင်းတွင် ဂန္ထဝင်ဖြစ်၍ လက်တွေ့အသက်တာအတွက် သင်ခန်းစားများစွာ ရရှိနိုင်သည်။၁
ကျမ်းစာလေ့လာရာတွင် အစွန်းနှစ်ဖက်သည် အန္တရာယ်ကြီးမားပါသည်။ ထို့ကြောင့် လူ့စိတ်ကူး စိတ်သန်းများကို အတတ်နိုင်ဆုံး ရှောင်ကြဉ်ပါမည်။ အချို့အမည်နာမများ၏ အဓိပ္ပာယ်သည် အတိအကျ တစ်ခုတည်းယူ၍ မရ။ အဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုး ပေါ်နိုင်ရာ အသင့်လျော်ဆုံး အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူထားသည်။
↑ Oxford English Dictionary တွင် သမ္မာကျမ်းလာ Judge များကို A leader having temporary authority in ancient Israel in the period between Joshua and the kings. ဟူ၍ ဖွင့်ဆိုသည်။
↑ The Definition of 'Judge' in OED
↑ Bacon & Sperling 2007, pp. 563–66.
↑ Alter 2013, p. 105.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တရားသူကြီးမှတ်စာ&oldid=700465" မှ ရယူရန်